DBF Isixhobo sokulungisa. DBF Ukubuyisela isoftware. DBF Lungisa isixhobo.
DataNumen DBF Repair Ingaba i eyona DBF isixhobo sokubuyisela emhlabeni. Inokulungisa urhwaphilizo DBF Iifayile zedatha kunye nokufumana kwakhona idatha yakho kangangoko kunokwenzeka, ngaloo ndlela kuncitshiswa ilahleko kurhwaphilizo lwefayile.
Ngoba DataNumen DBF Repair?
Iimpawu eziphambili kwi DataNumen DBF Repair v2.9
Xhasa zonke iinguqulelo ze DBF iziko ledatha, kubandakanya i-dBASE III, i-dBASE IV, i-dBASE 5 yeedosi, i-dBASE 5 yeewindows, iFoxBase, iFoxPro, iFlashPro ebonakalayo, njl.
Inkxaso yokulungisa DBF iifayile ezinememo okanye amabala edatha yedatha agcinwe kwiifayile ze-DBT okanye ze-FPT.
Inkxaso yokwahlulahlula DBF ifayile xa ubungakanani bayo bufikelela kumda ochazwe kwangaphambili, ngakumbi, inkxaso yokwahlulahlula i-2GB DBF iifayile.
Inkxaso yokwahlula itafile xa inani lendawo yayo ifikelela kubungakanani bommandla obuchazwe kwangaphambili.
Inkxaso yokulungisa DBF iifayile kwimithombo yeendaba eyonakeleyo, njengediski yefloppy, Zip Iidiski, iiCDROM, njl.
Inkxaso yokulungisa ibatch ye DBF iifayile.
Inkxaso yokufumana nokukhetha ifayile ye DBF iifayile ezizakulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Ukudityaniswa kwenkxaso kunye neWindows Explorer, ke unokuzilungisa DBF ifayile kunye nemenyu yokuqulathiweyo yeWindows Explorer ngokulula.
usebenzisa DataNumen DBF Repair Ukufumana kwakhona ukonakala DBF neeDathabheyisi
Xa i-dBase yakho, iFoxBase, iFoxPro kunye neVisual FoxPro yolwazi (.dbf iifayile) zonakalisiwe okanye zonakele kwaye ngekhe uzivule ngokwesiqhelo, ungasebenzisa DataNumen DBF Repair ukuskena ifayile ye dbf iifayile kunye nokufumana kwakhona idatha kwiifayile kangangoko kunokwenzeka.
Phawula: Ngaphambi kokufumana kwakhona ukonakala okanye ukonakala dbf ifayile nge DataNumen DBF Repair, nceda uvale naziphi na ezinye iinkqubo ezinokuthi ziguqule ifayile ye- dbf ifayile.
Khetha eyonakeleyo okanye eyonakeleyo dbf ifayile eza kulungiswa:
iqhosha lokufumana dbf ifayile izakulungiswa kwikhompyuter yendawo.
Unokukhetha ifomati yomthombo dbf ifayile. Okwangoku ezi fomati zilandelayo ziyaxhaswa:
Ngokuzenzekelayo, ifomathi isetelwe "Ukubona ngokuzenzekelayo" ukuze DataNumen DBF Repair izakubha ifomathi yomthombo dbf ifayile kunye nemveliso esisigxina ngokungqinelana nefomathi ebanjiweyo. Nangona kunjalo, ukuba ifayile yemveliso ayinakuvulwa ngempumelelo sisicelo sakho, emva koko unokuchaza ifomathi yokunyanzela DataNumen DBF Repair ukuvelisa ifayile kwifomathi ehambelana nesicelo sakho.
Ngokuzenzekela, DataNumen DBF Repair iya kugcina i-fixed dbf isiseko sedatha kwifayile entsha enegama elithi xxxx_fixed.dbf, apho i-xxxx ligama lomthombo dbf ifayile. Umzekelo, kumthombo dbf ifayile yonakele.dbf, igama elingagqibekanga lefayile emiselweyo iya konakaliswa -Fixed.dbf. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
iqhosha, kwaye DataNumen DBF Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa imvelaphi dbf ifayile. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba ngaba umthombo dbf isiseko sedatha sinokulungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Ngoku ungavula i-fixed dbf ifayile enezicelo ezihambelanayo.
DataNumen DBF Repair 2.4 ikhutshwa nge-23 kaDisemba, 2020
DataNumen DBF Repair 2.2 ikhutshwa nge-6 kaNovemba ngo-2020
DataNumen DBF Repair 2.1 ikhutshwa nge-10 kaNovemba ngo-2019
DataNumen DBF Repair 2.0 ikhutshwe nge-24 ka-Agasti ka-2013
DataNumen DBF Repair 1.6 ikhutshwa ngoMatshi 24, 2008
Inkxaso yokwahlulahlula DBF ifayile xa ubungakanani bayo bufikelela kumda ochazwe kwangaphambili.
DataNumen DBF Repair 1.5 ikhutshwa nge-12 kaJulayi, 2006
Yongeza ulawulo ngakumbi kwi-DBT / FPT yokubuyisela ifayile.
DataNumen DBF Repair 1.4 ikhutshwa ngo-Disemba 5, 2005
Ukuphucula indlela yokunika ingxelo ngempazamo.
Inkxaso yokufumana kwakhona iinkalo zebhanari.